Maxey ka cabanayaan reer Waqooyiga ku sugan Muqdisho? | KEYDMEDIA ENGLISH
Maxey ka cabanayaan reer Waqooyiga ku sugan Muqdisho?
Dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi, ayaa xilligan ka cabanaya Ra'iisul Wasaare ku xigeenka dalka, Mahdi Maxamed Guulleed, kaa oo ku haya dhibaatooyin fara badan.
MUQDISHO, Soomaaliya - Waxey ka cabanayaan Caburin, cagajugleyn iyo xarig uu Mahdi Gulleed u geysanayo dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi, ee ku sugan Muqdisho, iyagoo ku eeddeeyey inuu ugu awood sheeganayo kursiga uu ku fadhiyo.
Dadkan ka soo jeeda waqooyiga dalka, ayaa tilmaamaya, in Mahdi Guulleed uu fara galin ku hayo kuraasta beelaha gobollada waqooyi, oo uu doonayo inuu saaro dad uu isagu wato.
Waxey sameysteen dalad ay ku mideysan yihiin, taas oo ay ugu magac dareen midnimo, waxeyna wasaaradda amniga u direen warqad ay ku dalbanayaan, in loo fasaxo qabashada, bannaan-bax ay kaga hadlayaan tacadiyada uu ku hayo Mahdi Gulleed.
Inkasta oo aysan shaacin waqtiga ay dibadbaxa dhigayaan, haddana wasaaradda amniga ayaa aqbashay dalabkooda bannaan-baxa, sida uu warbaahinta u sheegay Sakariye Nuur Saajin, oo ah gudoomiyaha dalada ay ku midoobeen, dadka ka soo jeeda gobollada waqooyi ee ku sugan Muqdisho.
Mahdi Gulleed ayaa si dadban ula shaqeynaya, hoggaanka waqtigiisa dhamaaday, ee sharci darrada ku fadhiya madaxtooyada, isagoo u qaabilsan in kuraasta gobollada waqooyi, ay ku soo baxaan dad taabacsan Farmaajo, wuxuuse Rooble iyo mucaaradka u matalayaa, nin qunyar socod ah, oo midnimo doon ah.
Wuxuu boobay kursigii ugu horreeyey ee aqalka hoose, kaas oo tirsigiisu yahay, Hop-239, waxaana arrintaasi cabasho ka muujiyey beesha uu ka soo jeedo, wallow markii danbe sifo sharci darro ah, uu ugu xukmiyey guddiga xalinta khilaafaadka.